Midika Fahafahana Mandefa Anao Any Am-ponja Ny Fihinanana “Burger” Noho Ilay Fandraràn’ny Fanjakàn’i Maharashtra Tsy Hihinana Hena #BeefBan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2015 18:54 GMT
Mpikatroka iray mamatotra ny sarontavan'ny iray hafa miendrika omby vavy, mitaky fandraràna ny famonoana omby. Mumbai, India. Sary an'i Awadeshkumar Sidhpuri. Fizakàmanana Demotix (5/11/2012)
Niteraka adihevitra mivaivay tao India ny fandraràna ankapobeny ny famonoana omby ao amin'ny fanjakàn'i Maharashtra has sparked heated debate in India.
Noraisina ho masina ny omby ho an'ny finoana Hindoisma ary fady amin'ny sakafon-dry zareo ny hena. Efa voarara ao anatin'io fanjakàna io ny famonoana omby vavy, saingy ity lalàna ity dia manitatra ny fandraràna ho any amin'ny omby lahy, ombimanga ary ny zanaka omby, ary mahatonga ny fanànana na fivarotana hena omby ho toy ny heloka azo saziana amin'ny fampidirana am-ponja dimy taona sy sazy ara-bola 10.000 ropia (eo amin'ny 161 dolara amerikana).
Navahana manokana tao anatin'ilay fandraràna ny ombin-drano; i Maharashtra no fahatelo amin'ny mpamokatra hena omby betsaka indrindra ao India.
Nohamafisin'ny filoha Indiana, Pranab Mukherjee, ilay tolo-dalàna avy amin'ny vovonana Shiv Sena an’ny antokon'ny elatra havanana Bharatiya Janata Party (BJP) tany am-piandohan'ny Martsa, 19 taona taorian'ny nanoloran'ny Shiv Sena azy io voalohany indrindra. Ilay lalàna dia manitsy ilay “lalàna Maharashtra Animal Preservation Act (MAPA), 1976″, izay mamela ireo mpamono omby, ombimanga ary ombin-drano, hanana taratasy milaza fa “azo-vonoina”. Tamin'ny 1995, nihetsika hanitatra ilay fandraràna ny Shiv Sena, saingy satria niova tànana ny governemantam-panjakana, dia nipirina ihany koa ilay tolo-dalàna avy amin-dry zareo. Tapabolana taorian'ny nahalanian'ilay politisiana avy amin'ny BJP, Devendra Fadnavis, ho lehiben'ny governemanta, nanosika ho amin'ny fampandaniana ilay tolodalàna ireo mpomba azy.
Nibitsika ho fiarahabàna ilay fanamafisana nataon'ny filoha i Fadnavis:
Misaotra betsaka an'Atoa Filoha Hajaina tamin'ny fanamafisana ny MaharashtraAnimalPreservationBill. Ny nofinofinay handraràna ny famonoana omby vavy no tonga tena izy ankehitriny.
Kirit Somaiya, mpikambana ao amin'ny parlemanta ary politisiana avy amin'ny BJP no niantso azy io ho “dingana iray ara-tantara, izay misy fifandrohizany amin'ny resaka kolontsaina sy toekarena ho an'ny fanjakàna.”
Efatra ambiroapolo ny fanjakàna Indiana manana lalàna misoroka ny famonoana omby vavy. Na eo aza izany, efa naminavina ny ho mpanondrana hena omby betsaka indrindra erantany i India atsy ho atsy.
Tsy ela taorian'ny nivoahan'ny vaovao ho fantatry ny rehetra, naneho hevitra momba ilay fandraràna ireo mpisera ety anaty aterineto, tamin'ny fampiasana ny tenifototra #BeefBan, izay lasa iray amin'ireo tenifototra noresahana be nanerana ny tany, in- 22.000 nivoaka tao anatin'ny 24 ora latsaka.
Anjatony ireo mpikatroka mafàna fo, ireo mpanao fampielezan-kevitra, ireo mpitarika ara-panahy no nanao famoriam-bahoaka nikatsahana ny fandraràna ny famonoana omby, sy fanondranana azy. Mumbai, India. Sary an'i Awadeshkumar Sidhpuri. Fizakàmanana Demotix (5/11/2012)
Mohammed Hisamuddin, mpampiasa Twitter, nibitsika nangataka ilay fandraràna mba handeha lavidavitra kokoa:
Ireo vokatra azo avy amin'ny omby. Ankehitriny rarào daholo izy rehetra ireo, miangavy. #BeefBan
Kaonty hala-tàhaka avy amin'ny an'ilay mpanoratra fantatra erantany, Salman Rushdie, nibitsika hoe :
Arahabaina ry Maharashtra: tsara antoka kokoa ankehitriny ny omby vavy noho ny vehivavy, Dalit na Miozolmana eto amin'ny fanjakana.
Ao India, manodidina ny 93 isanandro ireo vehivavy voaolana, araka ny nambaran'ny Birao misahana ny Antontanisam-pirenena momba ny heloka bevava.
Nanampy i Neeti Palta, mpanoratra mahaleotena sady mpanao hatsikana, hoe :
Tsara ny mahafantatra fa ankehitriny dia afaka mivoaka amin'ny maizina ny omby vavy ary mitafy izay tiany #BeefBan
Ilay mpanao gazety sady mpanoratra tantara, Shobhaa De, naneho hevitra tamin'ny fitakiany ny lehiben'ny governemanta mba hanipy azy any amponja noho ny nihinanany hena omby :
Aiza ny hena omby ? Ry Ing. Phadnis sy ny tariny, vonona ny hiatrika 5 taona an-tranomaizina aho mba hiarovako ny zon'ireo mpihinana hena omby eto Maharashtra.
Nanosoka hevitra tamin-kanihany i Vir Das, mpihira sady mpiantsehatra, momba ny handraràna ny nify:
Dear Govt. With beef, let's ban teeth. We can live on vegetable smoothies and this way your politicians can't make hate speeches anymore 🙂
Ry Govt. Miaraka amin'ny hena omby, ndeha koa horaràntsika ny nify. Afaka mivelona amin'ny ron'anana isika, ary amin'izay koa ireo politisiananareo tsy afaka ny hanao kabary feno fanakahalàna intsony 🙂
Ao amin'ny Facebook, ilay mpampiasa vola, Mahesh Murthy, dia miady hevitra mikasika izay maha-mendrika ny fandraràna sakafo :
[..] raisinareo ho masina ny omby vavy ary dia tsy haninareo. Ekena, rasiko ho masina ny anana “epinard” ary tsy hohaniko. Kanefa izany tsy midika fa ho azoko atao ny hanakana anareo tsy hihinana “epinard” ary ho azonareo atao ny hanakana ahy tsy hihinana omby vavy. Maninona no tsy izay sakafo mampiahiahy anao no iasanao saina, izaho mba hiasa loha amin'ny ahy. [..]
Ao anatin'izay lahatsoratra izay ihany, manontany ny fitokisana azo apetraka amin'ny BJP i Murthy amin'ny tsy nahavitàny nanome ireo fitaovana fototra no sady nahavita nanakipily ireo lalàna henjana tahaka izany :
[..] ny ho amin'izany ve no nifidianana ny Bharatiya Janata Party (BJP) ? Amin'ny zavatra rehetra ilain'i Maharashtra, toa ny fandraràna ny hena omby no tena manana lanja indrindra sy mahamaika noho ny famahàna ny olan'ny rano fisotro, ny herinaratra ary ny olan'ny asa?
Maro tamin'ireo kintan'ny Bollywood no naneho hevitra tao amin'ny Twitter momba ilay fandraràna :
@TandonRaveena: Ny hany hevitro momba ny fandraràna ny hena omby dia tsy tokony ho ampiharina izy io, fa tokony ho safidy… Safidy manokan'ny olona ny hihinana na tsia
Shoaib Daniyal, bilaogera, dia namelabelatra ny fahatsapàna ara-politikan'ireo mpino Hindous izay nikorontan-tsaina noho ny nataon'ireo politisiana :
Tamin'ny fampielezankevitra nataony fony hofidiana ho praiminisitra, nampiasa ny herin'ny fihetsehampon'ny omby vavy i Narendra Modi mba hamelezana ny Governemantan'ny Vovonana Progresista Mitambatra UPA. “tena mampalahelo ahy izany,” hoy izy nanoratra tao amin'ny bilaoginy, “hoe ny governemanta UPA, tarihan'ny Kaongresy no hampiroborobo ny famonoana omby vavy ary hanondrana hena omby sy hitondra amin'ny ‘Revolisiona Mavokely’”.[..]
Io fomba famindra mifanohitra entina miatrika ny olan'ny fiarovana ny omby vavy io dia mampiseho fa entina kokoa amin'ny lafiny politika ilay izy fa tsy noho ny resaka ara-pinoana. Araraotin'ny fanjakana sy ireo politisiana ny fihetsehampo amin'ny fiarovana ny omby vavy mba hanetsehana ny olona sy hahazoana vatom-pifidianana, ikendrena ireo Miozolmana mahantra sy ireo Dalits amin'ny alàlan'ny fiampangàna azy ireny ho mpamono omby vavy. Mazava loatra, raha mbola iniana tsy raharahaina ny antony sasany (ho toy ny vokatr'ireo fepetra ara-toekarena), dia tsy hahavita na inona na inona ireny lalàna ireny raha ny marina, ho entina manatsara ny tahirinà biby fiompy eto amin'ny firenena.
Hetsi-panoherana tao Guwahati, Assam, India nanoherana ny fanondranana an-tsokosoko ny biby fiompy ho any Bangladesh mpifanolo-bodirindrina aminy, ary any izy ireny no vonoina. Sary avy amin'i Abdul Sajid. Fizakàmanana Demotix (28/8/2009)
“Tokony ho tezitra ianao satria manitsakitsaka ny fahalalahan'ny vahoaka hihinan-kanina araka izay safidiny ny fanjakana. Ary raha mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby ianao dia tokony ho faly sy hamily ny hatezeranao any amin'ny fandraràna ireo mpamono akoho, kiso, osy sy ombin-drano [..]”,hoy i Arun George, bilaogera .
Toy ny ankamaroan'ireo olana ara-pinoana sy ara-piarahamonina, ity fandraràna hena omby amin'izao fotoana ity dia nisarika fanehoankevitra mahery vaika avy amin'ny media sy ny olona. Ho setriny, nanamafy ny ezaka fampielezankeviny ireo mahery fihetsika ary namely ny olona tany anaty tambajotra sosialy tany noho ny fanoheran'izy ireny ny fandraràna ny hena omby. Maro ireo feo miteny manohitra ilay fandraràna no nanameloka ny fanjakàna sy ny governemanta foibe ho tsy nandray ho matotra ilay olana, toy ireo fitaovana fototra, ny zon'ny vehivavy ary ny filaminan-tsaina sy ny fahantrana tsy mitsahatra mitombo, fa naleony nifantoka tamin'ny fandraràna hena omby.